6 Crucial Semalt SEO Tips Chero Wese Smart Entrepreneur Unofanira Kubvuma
Ivan Konovalov, Mutevedzeri weMuteresi weVatengi ve Semalt Digital Agency inopa ruzivo rwekugadziraSEO chiito mumunharaunda yako.
Mamwe emakambani akaisvonaka uye akabudirira zvikuru Fortune 500 munyika yezuva ranhasi ane chinhu chimwe chete chikuru: vazhinji vavovane nzvimbo yepamusoro yewebsite, iyo inoreva kuti webhutori yepamutemo inowanikwa mumigumisiro shomanana yekugadzirwa inogadzirwa nemitsva yekutsvagakubva pakutsvaga kwewebhu, kunyanya kana nzvimbo inowanikwa mumitsara yekutsvaga. Zvisinei, mawebsite aya haana kungoenda ikokomagic. Dzimwe hutano hwepamusoro-soro hwakashandiswa, nzira dzakateverwa, uye kuongororwa kwakaitwa. Ndizvo zvinotsanangurwa muchidimbupane zvatinoita muSemalt ndeye.
Mutsanangudzo yaro, kutsvaga injini yekutsvaga, iyo inonziwo kutsvaga kutengesa kana SEO, ndiyo nzira yekuwedzera kana kuvandudza kuonekwa kwewebsite yepaIndaneti. Inosanganisira keyword kutsvakurudza, kugadziridza zvinyorwa nezvakakosha mazwi,uye kushandiswa kwaro kune imwe webhusaiti kuitira kuti inokwezva kutaurirana kwakawanda, ROI, uye kuvimbika kubva pamusika wako wekutengesa kana zvakatarwavateereri. Nzvimbo dzehutano dzinokosha zvikuru kana zvichiuya kuSEO. Ichi ndicho chikonzero, pasi apa pane mashoma mashoma anokosha eSEOyakakurudzirwa naIvan Konovalov iwe unofanirwa kuziva semunhu akachenjera webhizimisi.
1. Sarudza Mashoko Akanaka Yako Akarurama
Kune ani naani ane ruzivo pamusoro peiyo SEO iri, kazhinji, zvinenge zvakajeka kuti mazwi makuru anonyanya kukosha. Varivapfuri vekudanidzira muzviitiko zve SEO, kunyanya kana zvakanyatsobatanidzwa mune zviri mukati. Sezvinei nenyaya, kutsvaga injini inogadziratsvaga zvitsva zvichienderana nekubatanidzwa kwemashoko akaiswa mumushandisi we internet pavanotarisa mashoko pamusoro pewebhu. Kuwanayako keywords kodzero inosanganisira kusanganisira hama dzinokosha kana mazita avo, iyo inotengeswa pamusika yako inogona kuisa mukati kana ichitsvaganokuda kwebasa kana chigadzirwa chinopiwa nebhizimisi rako..Zvimwe zvisikwa zvinogona kudiwa apa, kunyange zvazvo iri nyanzvi yebazi SEOinogona kubatsira kuumba chinhu chinokosha chinozobuda kunze kwekukwikwidza kwako mumusika.
2. Shandisa Zvinyorwa Zvitsva Nemavhidhiyo muSeO
Kutsvakurudza kunoratidza kuti mavhidhiyo nemifananidzo ndeimwe yezvigadzirwa zvakanakisisa mukudhinda. Izvi ndechokuti ivo vanobatana zvikuru uyeinokwezva pakuenzanisa nemamwe mashoko. Kana inoshandiswa muhutano, mavhidhiyo nemifananidzo zvinonyatsocherechedza makatekiti. Izvowosiyai kurangarira nguva dzose mupfungwa dzemakambani enyu anotarirwa. Zvisinei, vana ava vanofanira kufambidzana nekutsvaga injinirakagadziriswa uye rakakosha rakapfuma zvinyorwa zvinyorwa, tsanangura tsanangudzo uye ruzivo runobatanidza nemharidzo huru iri kuendeswamune imwe SEO campaign. Nhamba yakanaka yevashambadziri vepaIndaneti nevashandisi veIndaneti vanofurirwa kutora matanho kubudirirauye mavhidhiyo ane simba / mifananidzo, saka iva nechokwadi kuti iwe unoshandisa zvakanakisisa zvaungawana.
Somunhu anyanzvi vezvemabhizimisi, hazvingakanganisi kufunga kuti iwe wakaziva kuti inyika yepamba yatinogara.zvezuva rino nezera vanopedza nguva yakawanda pamafaira avo efoni, anosanganisira smartphones nemapiritsi, mukuenzanisa nedesktopmakombiyuta uye ma PC PC. Kuti urege kurasikirwa pane chikamu chikuru che keke kumakwikwi ako, iva nechokwadi chekuwedzeraiwe webhusaiti yako ye mobile inogadziriswa.
Mune mamwe mazwi, webhusaiti yako inofanira kuwanika kubva kune foni yesimbi pasina zvinetso kana zvinetso. Nzira iyo, yakovateereri kana kuti misika yakananga inokwanisa kuwana ruzivo rwakakosha kana kutenga zvigadzirwa zvako / mazano kune imwe nzvimbo. Mumwe haafanirikumirira kusvikira vari muhofisi kuitira kuti vagone kuraira imwe pizza, vachifunga kuti iyo ndiyo mhando yebhizimisi. Zvakawanda sei izvi zvinopfuuraye web web design issue, ine SEO-yakanaka, mobile version yewebsite yako ichakupa mubayiro zvakanaka.
Zvizhinji sezvo pasina mubvunzo kuti Google ndiye mambo wezvinjini dzinotsvaga, nhamba yakanaka yevanhu inosarudzawo dzimwe nzira dzakadai seBing ne Yahoo,kungotaura nezvezvishoma. Iwe haudi kuisa mazai ako ose mune rimwe tswanda. Kuti uwane mhinduro dzakanaka pane SEO yako yekutsvaga, iva nechokwadi chekuisanzvimbo yako kune vamwe vatambi vari mumhizha yekutsvaga injini pamwe chete, kune zvose zviripo uye zvakabhadharwa zviziviso..Munyaya iyi, zvingava kuchenjeradzidza chinhu kana zviviri pamusoro pokuti nzira dzakasiyana siyana dzekutsvaga injini dzinowanikwa sei mawebhusayithi.
5. Chengetedza Ziso Renyu Munharaunda SEO
Sezvo rudo runotanga pamba, bhizinesi haringatori mumusika wekutengesa kunze kwekutsvaga shanduko yeSEO yemo, kunyanyakana iri kutanga. Sezvo muzvinabhizimisi akachenjera, zvinokosha kuziva kuti misika yako yemunharaunda inokwanisa kuziva kana iwe unenge uchidakana kuti hazvizobudiriri paIndaneti kumativi ose. Icho chinonyanya kuita nezvekugadzira zvinhu zvakawanda zvinokonzerwa nehugoni kunowanikwa pawebsite yakokubva kutsvaga kunzvimbo, iyo inonyanya kukosha kana iri kuuya pakutsvaga injini.
Kuti uwane zvakanakisisa kubva pakutsvaga kwekutsvaga kwekugadzirisa maitiro ako, nguva yakakwirira yaunofunga kushandisa mabhizinesi emunharaunda. Simbadirectory mapeji akaita sejiji mapeji, Yelp, uye mamwe mawebsite mawebsite anogonawo kuuya. Zvinokosha kuti nguva dzose uone kuti izvozvobhizinesi rako rezvemabhizimisi panzvimbo yekunyoresa mazita rinoramba rakagadzikana uye rakarurama, kunyanya kuchengeta nzira yekuti bhizinesi rako 'sei uyenhoroondo yedhesi yakanyorwa kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzepaIndaneti mapurisa.
6. Usamirira Kusvikira Yacho Site Yacho Isingashandisi
Hungu, iwe unogona kunge wakaisa zvimwe zvinyorwa zvinokosha uye peji yepaji yepaiti panzvimbo yako yekare; asi izvozvo hazvireve kuti zvinoshandiswahazvizodiwi kusvikira pakupera kwenguva. Chero munhu upi zvake ane dzidzo yepamusoro anobvumirana kuti zvimwe ruzivo haruve rwakakoshanenguva. Kunyanya pazvinouya kuvateereri veInternet uye web shop shoppers, hamudi kuvasiya vasina unengaged. Kuisa mamwe mashoko matsva,zvinyorwa, uye zvinokosha data zvose zvino uye zvino zvichaita bhizimisi rako mberi mumutambo, kunyanya kana iri kuuya webhutta uye injini yekutsvagarankings. Ingova nechokwadi chokuti nguva dzose unopa zvinhu zvinogutsa uye zvinonakidza izvo zvinotengeswa pamusika kana vateereri vachawana rubatsiro uye vachiita.Vimba neni, zvigaro ndeye mambo, uye iwe hauzodembi yako SEO kuedza.
Kunyange zvazvo isinganzwisisiki nevakawanda, SEO ndiyo chinhu chikuru chekubudirira kwebhizimisi chero ripi neripi rinoshandiswa paIndaneti. Nekutsvaga kwakarongeka uye kwakarongekainjini optimization urongwa, inouya nemigwagwa yakawanda, yepamusoro yeGoogle rankings, more sales, nekuwedzera kwebhizimisi rako, kunyanya kubva paIndanetikushanda. SEO inogona kuva yakakosha uye yekudya nguva pane imwe nguva, saka iwe ungada kuisa mune imwe nyanzvi yebazi SEO kuti uwane zvakanyanyayebhizimisi rako reku online Source .